Oljefondet: 1,76 milyan oo Kr ayaa sanduuqan ugu jirta qof walba oo Norwiiji ah. - NorSom News
Oljefondet: 1,76 milyan oo Kr ayaa sanduuqan ugu jirta qof walba oo Norwiiji ah.
Foto: Skjerdump-Nbims Cadadka lacagta kujirto sanduuqaas.
Qiimaha sanduuqa keydka ee lagu keydiyo lacagta shidaalka kasoo gasho dowlada Norway(Oljefondet), ayaa gaaray heerkii ugu sareysay abid. Wuxuuna hada qiimihiisu marayaa 9.384 bilyan oo lacagta Norway ah.
Taas oo ka dhigan in hadii loo qeybiyo tirada bulshada Norwiijiga ah, ay qof walbe kusoo aadeyso 1,8 milyan oo kr. Tirada dadka Norwiijiga ah ayaa lagu qiyaasaa 5,3 milyan oo qof.
Sanduuqaas oo loogu yeero “Statens Pensjonsfond utland” ayaa konto ku leh bankiga dhexe ee Norway, waxaa lacagtaas lagu sameeyaa maalgalin, si looga helo faa´iido, lafahana loo badbaadiyo.
Wargeyska E24 ee ka warama dhaqaalaha ayaa saaka qoray in qiimaha sanduuqaas uu gaaray meeshii ugu sareysay abid, waxaa sanadkii ugu danbeeyay ku kordhay 1,100 bilyan oo kroner.
Xigasho/kilde: Oljefondets verdi setter rekord igjen, og tilsvarer nå 1,76 millioner kroner per nordmann.
Halkan ayaad si toos ah saxad walba ugala somon kartaa qiimaha sanduuqaas.
Previous articleWasiirka isdhexgalka oo UDI-da ku amray inay dhalashada ka celiyaan nin argagaxiso loo xukumay, hadii uu buuxiyay shuruudaha.
Next articleMareykanka oo cadaadis saaraya Sweden, si fanaan xabsiga looga sii daayo.